Ngeminyaka esiyifumene nayo, isikhumba sethu silahlekelwa ukunyaniseka nokuqina. Iba yome, ibuhlungu kumgca kwaye, yintoni edabukisayo kakhulu, kukho imibimbi ebonakalayo, i-creases kunye nemigudu. Eli sikhumba sidinga ukunakekelwa ngokuchanekileyo kunye nokunyamekela. Kuye nemigaqo eqhelekileyo yokunyamekela kwesikhumba ngemibimbi, sinqwenela ukukuzisa kweli nqaku. Ngoko, isihloko sethu namhlanje: "Ukunyamekelwa kwesikhumba ngemibimbi". Masizame kunye nokuqwalasela uluhlu lwezinto ezibizwa ngokuthi "ugogo" iingcebiso zokunakekelwa kwesikhumba kunye ne-drawback drawback.
Imigaqo ebalulekileyo yokunakekelwa kwesikhumba ngemibimbi, kwindawo yokuqala, kubandakanya ukusetyenziswa koluhlu olukhethekileyo olushushu. Ukunyanzeliswa okunjalo kubambelela kakuhle kwaye kubonakalise isikhumba, ukuphakamisa izwi kunye nokuphucula umbala. Ngenxa ye-compress enjalo, sidinga ithawula encinane okanye i-napkin, ekufuneka ihliswe emanzini atshisayo ukwenzela ukuba isalathisi sithathwe yiyo. Emva koko, ithawula okanye i-napkin kufuneka iguqulwe kwaye ifakwe ebusweni. Ukubeka le compress iyanconywa ukuba ivela ngaphantsi kwintsimbi kwaye ibambe yonke indawo ebunzini lakho nasemahlathini. Gcina i-compress hot on the face, udinga malunga nemizuzu engama-3-5. Emva koko kufuneka udibanise ubuso bakho ngamanzi abandayo, oya kuwuhlaziya ngempumelelo.
Kwakhona, ekukhathaleleni kwansuku zonke imibimbi, okanye kunoko isikhumba, esilungelelanisa imibimbi, sincoma ukuba uquka ukusetyenziswa kwesisombululo esikhethekileyo se-saline, esifanele satshintshwe ubuso. Isisombululo esinjalo kulula kakhulu ukulungiselela ngokuzimela ekhaya. Ngenxa yale nto sidinga amanzi abilisiwe kunye neekoni zetyuwa eziqhelekileyo. Thatha ihafu yesipuni setyuwa uze uyifake kuma-milliliters ama-200 amanzi (malunga ne-1 iglasi). Emva koko, xubana kuze kube yilapho ityuwa ichitheka ngokupheleleyo kwaye isisombululo sethu setyuwa silungele ukusetshenziswa.
Ukongezelela, kubalulekile ukuba ukhumbule malunga nenkqubo enjalo yansuku zonke, njengento yokuhlalisa ubuso obukhanyayo kunye neengalo zeminwe yakho. Ukwenza oku, udinga, emva kokuhlamba izandla zakho, ngeeminwe zakho imizuzu emihlanu ukuze wenze ukukhanya okukhanyayo kwesikhumba sonke ebusweni. Ukuxilisa kufuneka kufakwe kwiinkonzo zonyango ngaphambi kokulala. Emva kokusilalisa, unokubeka ubuso bakho kwi-cream ekhethekileyo elwa nemibimbi. Ngendlela, ukhilimu wokunakekelwa kwesikhumba kunye nemibangano ungakulungiswa nguwe. Thatha naluphi na ukhilimu onomsoco (ityhubhu eli-1) uze ungeze kuso isiqingatha sepaspuni yetyuwa. Emva koko xubusha kakuhle. Isikhrimu esiphumelayo sisetyenziswe ngokuqhuba ngeminwe yakho (2 imizuzu) kwiindawo apho imibimbi ibonakala khona.
Ngaphezu koko, ukhathalela lolu hlobo lolusu, kufuna iindlela zokuzicoca zenzelwe ukugcina umswakama wesikhumba. Kule njongo, kucetyiswa rhoqo ukuba isebenzise iincinci ezizodwa zokunyusa, ukuhlamba i-steam esekelwe kwi-decoction yemifuno kunye nokujongana nemaski kwiziqhamo ezintsha. Ukongezelela, kuyimfuneko ukusebenzisa izakhiwo ezikhethekileyo zezonyiso ezenzelwe ukuphucula isikhumba ebusweni. Kodwa ebusika, kufuneka ufumane izimonyo zondlo ebusweni.
Sincoma ingqalelo ekhethekileyo kwiimpawu ezizodwa zemithi ebusweni. Ezi zinto ziyakwazi ukulungiswa zodwa.
I recipe yileyokuqala . Thatha ilitha eli-1 lewayini elimhlophe elimhlophe kwaye ungeze kuyo imifuno njenge-20 gram ye-calendula kunye ne-ingeniso efanayo, kunye ne-30 grams ye-chamomile yeyeza. Emva koko le ngxube yemfuyo iqhutyelwa iiveki ezimbini. Ngomhla we-15, i-tincture efunyenwe ihlungiwe ngesihlunu esihle. I-lotion yethu ilungele ukusetshenziswa. I-lotion ifumaneka imihla ngemihla, ngaphambi kokulala, ukusula ubuso kunye nentamo yentloko, uze usebenzise ukhilimu. Gcina lo lotion endaweni epholileyo. Lo myalelo ucebisa ukuba usebenzise ngexesha lebusika.
Iresiphi yesibini. Sithatha iikomkomere ezintsha kunye ezintathu zazo kwi-grater encane. Bese udibanise ijusi kubo. Emva koko sifumana i juice kwi-berries e-strawberry. Ijusi ehlanjululwe ngokutsha kwi-strawberries kunye namakhukhamba kufuneka afumane ama-gram angama-50 kwisithako ngasinye. Ngoku kufuneka udibanise i-strawberry kunye nejikisi ijusi ukuze umise iwayini elimhlophe (1 iglasi), kwakhona apha kufuneka uchithele i-0, 5 grams ye-salicylic acid. I-lotion yethu ilungele ukusetshenziswa. I-lotion efunyenweyo iyanconywa ukuba i-moisten ye-cotton swab ibekwe kwindawo yekhumba apho kubonakala khona imibimbi. Gcina le compress imizuzu engama-15, emva koko ungayifaka isicelo kwi-cream cream. Lo lotion isetyenziswe kakuhle ehlobo.
Iresiphi yesithathu. Sithatha kwaye sinqumle amaqabunga ambalwa kweso sihlahla, njenge-alo. Emva koko uhlambe ngokucophelela uze ulale efrijini, malunga neentsuku ezili-10. Khumbula ukuba la maqabunga ayanconywa ukuba afakwe ephepheni okanye kwiplastiki. Kufanele bavule kwaye "baphefumle". Emva kokuba amaqabunga alele kwindawo epholileyo ixesha lawo, asuse kwifriji kwaye uzalise i-1 ilitha yamanzi abandayo aphelileyo kwaye ushiye iiyure ezingama-2. Emva koko ukukhulelwa okufunekayo ubeke emlilweni omncinci kwaye ubambe imizuzu emihlanu emva kokubilisa. Isinyathelo sokugqibela ekulungiseleleni lo lotion kukuba uyayifaka ngesihlunu esihle. I-lotion yethu ilungele ukusetshenziswa. Ukufunwa kwemfuneko kuyimfuneko imihla ngemihla, ngaphambi kokulala, ukusula ubuso kunye nentamo, uze usebenzise ukhilimu okhethekileyo okondla. Gcina lo lotion endaweni epholileyo. Lo lotion, ngobuninzi, unamafutha abalulekileyo kakhulu, ama-enzyme kunye namavithamini, atholakala kumagqabi e-aloe. Uluhlu olunjalo lokunyamekelwa kwesikhumba ngemibonakaliso lusetyenziswa nanini na lonyaka.
Esinye isixhobo esisebenzayo sokunakekelwa kwesikhumba kunye nemisipha kukusetyenziswa kweemaski zobuso ngokuchanekileyo. Enye yeemaski eneempembelelo zokuvuselela yinto ebizwa ngokuba yi " Paris mask ". Kule mask, amaqabunga e-sauerkraut ayadingeka, ayanconywa ukuba abekwe kwisikhumba sokucoceka kwangaphambili sobuso ngobuncwane obuninzi. Emva koko, kufuneka ulale phantsi kwigumbi elifudumeleyo, kwaye ukhulule izihlunu zabantu ukuze ugcine le maski imizuzu eyi-15-20. Emva koko susela ubuso ngobushushu bamanzi.
I-Strawberry ne-Strawberry Juice kwi-Cosmetology
Ukunyamekelwa kwamehlo, i-gymnastics kwamehlo
Indlela yokunyamekela isikhumba esomileyo
Amanqatha angavumelekanga ane ham kunye noshizi
UVictoria Bonya waphawula ngamahemuhemu malunga nokuhlukana nomyeni wakhe, ifoto
I-salon yobuhle kwiikati nasezinja
Iintlobo kunye neendlela zokwakheka komzimba
Ukutya okungekho-carbohydrate: kukufanele ukuba ulindele kuyo
Isaladi yesarletti yeGarnet
Amabali amahle kakhulu ngokuhaha
Iipancakes ngamanzi amaminerali
Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngexesha lokuya esikhathini?